merolagani - मुक्तिनाथ बैंकको सेयर कहिलेबाट आउने भयो लिलामीमा ?
मुक्तिनाथ बैंकको सेयर कहिलेबाट आउने भयो लिलामीमा ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक र सर्बसाधारण गरी एक लाख १३ हजार छ सय ६० कित्ता सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । बैंकले सो परिणामको सेयर बोलकबोल मार्फत माघ १२ गतेबाट बिक्री गर्ने भएको हो ।
बैंकले सर्वसाधारण समूहतर्फको एक लाख तीन हजार एक सय ६७ कित्ता र १० हजार चार सय ९३ कित्ता संस्थापक सेयर बोलकबोलमा बेच्न लागेको हो । बैंकले असोज २१ देखि कात्तिक २५ गतेसम्म हकप्रदमा बिक्री नभएको सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो ।
ईच्छुक लगानीकर्ताले बोलकबोलमा माघ १९ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताले कम्तिमा एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्य तोकी त्यसभन्दा बढी अंकित मूल्य राखेर आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
बोलकबोल मार्फत सेयर लिलामी गर्न बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल क्यापिटल तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक,पृथ्विचोक,पोखराबाट आवेदन फारम लिन र बुझाउन सकिनेछ । विक्री प्रबन्धक एनआइबीएल क्यापिटलले बोलपत्र माघ २१ गते दिउँसो ३ बजे लाजिम्पाटमा खोल्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तिय विवरण अनुसार बैंकको चुक्ता पूजीँ ८३ करोड ८४ लाख ३२ हजार रहेको छ । त्यस्तै बैंकले ९ करोड ९७ लाख ६ हजार रुपैंयाँ खुद नाफा गरी प्रतिसेयर आम्दानी बार्षिक ३२.३३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । बैंकको सेयर नेप्सेमा मंगलबार आठ सय रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार भैरहेको छ ।